Iyo yegumi edition yeApple Music Festival inotanga nhasi na10: 21 pm Spanish time | Ndinobva mac
Iyo yegumi edition yeApple Music Festival inotanga nhasi na10: 21 pm Spanish time
Elton John achange achitungamira kuvhura iyo 10th Apple Music Festival, na21: 30 pm nguva yeSpanish. Husiku hwakati wandei hwemakonzati, kubva nhasi kusvika zuva rinotevera 30. Makonati ayo Apple anotipa kuti tione pane ako ese marongero, zvinogara zvichikurudzirwa kuatarisa kubva kuApple TV kuti ugone kuanakidzwa nehukuru hwakanyanya.
Kunge gore rapfuura ne Ellie kubaya, muBritish muimbi ane rukudzo rwekutanga mutambo uyu kubva ku London Roundhouse.
Saka isu tichaona yakakosha chikamu chemimhanzi yazvino, icho kunyangwe zera rake rinoratidza hunhu hwake semuimbi uye muimbi mukonzati imwe neimwe. Apple pachayo inoitsanangura nenzira iyi paTunes.
Elton John, mumwe wevatambi vane mukurumbira uye vanyori munhoroondo, anga ari mumwe wembiru dzepasi rese kwemakumi mashanu emakore. Elton anounza mufaro nekusajeka kune zvese zvaanotamba, kubva pane yake inoshamisa solo basa kusvika kune yake philanthropic kuedza kune kwake kwakasarudzika sarudzo semutambi weElton Jones Rocket Hour paBeats 1. Gore rino tichaona Sir Elton zvakare zvakare vachinakidzwa padariro. mutambo waakatopfuura naka2013 nekonsati isingakanganwike.
Imba yekonzati ichavhura madhoo ayo na6pm UK nguva, kutanga konzati na20.30 pm. Zvinosara kuti zvionekwe kana achiridza chero rwiyo kubva pane yake nyowani dambarefu "Anoshamisa Anopenga Husiku" kunyange ichokwadi ichadzokorora misoro yekare.
Uyu mutambo unotanga nekumwe kupokana, kuve wekutanga mairi Iwe unofanirwa kunyoreswa kuApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi kuti unakirwe nayo. Kwemwedzi kwave nekukurukurirana nezve mikana iyo Apple inofanirwa "kuvhara" mutambo uye kuti hapana asina kunyoreswa aigona kuwana.
Chero zvazvingaitika, kuedza kwaApple mukutipa mukana wekuona nekunzwa maartist mazhinji munzvimbo pfupi kudaro yenguva inokosheswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo yegumi edition yeApple Music Festival inotanga nhasi na10: 21 pm Spanish time
Maitiro ekuisa font font pane macOS
Misiyano muhupenyu hwezuva nezuva pakati peiyo iPad Air 2 uye iyo 9,7-inch Pro